ခရစ်ယာန်သာသနာ (ဂရိ စာလုံး Xριστός မှ၊ ခရစ်စတို့စ်၊ “ယေရှု” ၊ စာပေအရ “ ဘိသိက်ခံသောသူ”) သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသော နာဇရက်မြို့သား ယေရှု၏ ဘဝအသက်တာနှင့် သွန်သင်မှုများအပေါ် အခြေခံသော တစ်ဆူတည်းသော ထာဝရဘုရားကို ယုံကြည်သောဘာသာရေးဖြစ်သည်။ခရစ်ယာန်များသည် ယေရှုကို ထာဝရဘုရားသခင်၏ သားတော်၊ လူ့ဇာတိအဖြစ်ကို ခံယူသော ဘုရားသခင်နှင့် လူသားတို့၏ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်ယာန်များသည် ယေရှုကို ခရစ်တော် သို့မဟုတ် မေရှိ ဟု အများအားဖြင့် ရည်ညွှန်းကြသည်။ခရစ်ယာန်များဟု လူသိများသော ခရစ်ယာန်အယူဝါဒကိုထောက်ခံသူတို့က ယေရှုသည် ဟီဘရူးကျမ်းစာ (ခရစ်ယာန်သာသနာနှင့်ဂျူးဘာသာအယူဝါဒတို့တွင် တူညီသောသမ္မာကျမ်း၏ အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန်သာသနာတွင် "ဓမ္မဟောင်းကျမ်း"ဟု ရည်ညွှန်းသည်) တွင် နိမိတ်ဖတ်ထားသော မေရှိဟု ယုံကြည်သည်။
ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းခွဲအများစုက ယေရှုသည် သက်ရှိနှင့်သေလွန်ပြီးလူသားအားလုံးကို တရားစီရင်ရန်နှင့် ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံသူများအား ထာဝရအသက်တာပေးရန်တစ်ဖန်ပြန်လည်ကြွလာဦးမည်ဖြစ် ကြောင်း သွန်သင်ကြသည်။ ယေရှုကို မြတ်သောအကျင့်သီလနှင့် ပြည့်စုံသည့် ဘဝအသက်တာ၏ စံပြပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သာမက ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်တော်ကို ဖော်ပြသောသူ၊ ဘုရားသခင်မှ လူ့ဇာတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဟူ၍လည်းမှတ်ယူကြသည်။ခရစ်ယာန်များကယေရှုခရစ်တော်၏တရားဒေသနာများကိုဧဝံဂေလိတရား(“သတင်းကောင်း”)ဟုခေါ်ဆိုသောကြောင့်ရှေးအကျဆုံးရေးသားဖော်ပြချက်များတွင် သူ၏ သာသနာပြု ခြင်းကို ဧဝံဂေလိတရားများအဖြစ် ရည်ညွှန်းသည်။
ခရစ်ယာန်သာသနာသည် ဂျူးဘာသာအယူဝါဒ ဂိုဏ်းခွဲတစ်ခုအဖြစ် စတင်ခဲ့ပြီး အာဗြဟံဘာသာတရားဟုသတ်မှတ်ခွဲခြားထားသည်။အရှေ့မက်ဒီတာရေးနီးယမ်းတွင်အစပြုပြီးဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ် အတွင်း လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာပြီး ဩဇာလွှမ်းမိုးလာခဲ့သည်။ ၄ ရာစုတွင် ရောမအင်ပါယာအတွင်း၌ အဓိကလွှမ်းမိုးကြီးစိုးသော ဘာသာတရား ဖြစ်လာခဲ့သည်။အလယ်ခေတ်တွင် ဥရောပတိုက်၌ ကျန်ရှိသောနိုင်ငံ အများစုကို ခရစ်ယာန်သာသနာအုပ်စိုးခဲ့သည်။အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊မြောက်အာဖရိကနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အချို့ဒေသများတွင်လည်း ခရစ်ယာန်အနည်းစု(တစ်ခါတစ်ရံများသည်လည်းရှိသည်) ရှိလာသည်။ စတင်တွေ့ရှိရာနှစ်များနောက်တွင် သာသနာပြုလုပ်ငန်းနှင့် လက်အောက်ခံ ကိုလိုနီအဖြစ် သိမ်းယူခြင်းတို့မှတဆင့် ခရစ်ယာန်သာသနာသည် အမေရိကနိုင်ငံများ၊ ဩစထရေလာဆီးယားနှင့် ကျန်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများသို့ ပျံ့နှံ့သွားသောကြောင့် ခရစ်ယာန်သာသနာသည် အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုကို ပုံသွင်းရာတွင် အဓိက လွှမ်းမိုးရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၁ ရာစုအစောပိုင်းအထိ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ယုံကြည်သူ သန်းထောင်ပေါင်း ၂.၂ ပတ်ဝန်းကျင်ခန့် ရှိနေခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန်သာသနာသည် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး ကမ္ဘာ့အကျယ်ပြန့်ဆုံး ဘာသာတရား ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ခရစ်ယာန်သာသနာသည် နိုင်ငံအတော်များများ၏ နိုင်ငံတော်ဘာသာလည်းဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်သာသနာကို အဓိကအားဖြင့်သုံးအုပ်စုခွဲခြားနိုင်သည်။ ကက်သလစ်ဘာသာ၊ ပရိုတက်စတင့်ဘာသာ နှင့် အော်သိုဒေါ့က်စ် တို့ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်များ၏ ယုံကြည်မှုမှာ ယေရှုကို ထာဝရဘုရားသခင်၏သားတော် အဖြစ်နှင့် မေရှိရ (ခရစ်တော်) အဖြစ် ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ “မေရှိရ” ဟူသော ဘွဲ့အမည်သည် ဟီဘရူးစာလုံး מָשִׁיחַ (māšiáħ) မှ ဆင်းသက်လာပြီး ဗျာဒိတ်ခံသောသူ ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဂရိဘာသာပြန် Χριστός (Christos) သည် အင်္ဂလိပ်စာလုံး “Christ” ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်တို့က ယေရှု၏ သေလွန်ပြီးမှ ပြန်လည် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းသည် ၎င်းတို့ယုံကြည်ခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းအရင်း ဖြစ်ပြီး (၁ ကောရိန္သု ဩဝါဒစာပဌမစောင် ၁၅ တွင်ရှု) လူ့သမိုင်းကြောင်းတွင် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ရပ် ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူကြသည်။ခရစ်ယာန်ယုံကြည်မှုများထဲတွင် ယေရှု၏ အသေခံခြင်းနှင့် ပြန်လည် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းသည် ခရစ်ယာန် အယူဝါဒနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုတို့ တွင်အခြေခံကျသော အဓိက ဖြစ်ရပ်နှစ်ခု ဖြစ်သည်။ဓမ္မသစ်ကျမ်းအရ ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် တင်၍အသတ်ခံခဲ့ရပြီး ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည်၊ သင်္ချိုင်းတွင် မြှပ်နှံခံခဲ့ပြီးမှ သုံးရက်အကြာတွင် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်။
[ယောဟန်. ၁၉၊ ၃၀-၃၁-] [မာကု. ၁၆၊ ၁-] [၁၆၊ ၆-] ယေရှု ကောင်းကင်သို့ တက်ကြွခြင်းမတိုင်မီ အချိန်အမျိုးမျိုးတွင် “တစ်ပြိုင်နက်ညီအစ်ကိုငါးရာမက” အပါအဝင် ကောတို့နှင့် နောက်လိုက်များအား ယေရှု ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှ ကြိမ်ဖန်များစွာ ကိုယ်ထင်ရှားပြခြင်းအကြောင်း ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယေရှု၏ သေဆုံးခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ခရစ်ယာန်တို့က ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအားလုံးတွင် အမှတ်ရကျင်းပသည်။ အထူးသဖြင့် မင်္ဂလာ သောကြာ နှင့် အီစတာတနင်္ဂနွေ အပါအဝင် သန့်ရှင်းသော ရက်သတ္တပတ် အတောအတွင်းတွင် ကျင်းပကြသည်။ ယေရှု၏ အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းကို ခရစ်ယာန် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုတွင် အရေးအကြီးဆုံးသော ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုဟု အများအားဖြင့် ယူဆကြသည်။ ဤဖြစ်ရပ်တို့သည် ယေရှုတွင် အသက်ရှင်ခြင်းနှင့် သေခြင်းအပေါ် ပိုင်စိုးသောအစွမ်းရှိပြီး ထို့အတွက်ကြောင့် လူသားများကိုလည်း ထာဝရအသက်တာကို ပေးရန် အာဏာနှင့်အစွမ်း ရှိသည်ကို ဖော်ပြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ခရစ်ယာန် အသင်းတော်များသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ဖော်ပြပါရှိသော ယေရှု၏ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအကြောင်းကို ချွင်းချက် အနည်းငယ်မျှနှင့် လက်ခံပြီး သွန်သင်ကြသည်။အချို့ ခေတ်သစ်ပညာရှင်များက ယေရှုနောက်လိုက်များ၏ ယုံကြည်ချက်ဖြစ်သော သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို သမိုင်းဝင် ယေရှုကို ဆက်လက်တည်ရှိစေခြင်းနှင့် ရှေးကနဦး အသင်းတော်များ၏ကြေညာချက်များကိုဖယ်ရှားမှုအချက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ အချို့လွတ်လပ်ခွင့်ကို လိုလားသောခရစ်ယာန်များသည် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်တကွပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်သည်ကို လက်မခံကြပေ။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကို အလွန်သင်္ကေတဆန်ပြီး ဝိညာဉ်ရေးရာ အားပေးသော ဒဏ္ဍာရီအဖြစ် ရှုမြင်ကြသည်။
သေလွန်ခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ပြောဆိုမှုများအပေါ် အငြင်းပွားမှုများသည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စကားရည်လုပွဲများနှင့် ဘာသာရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ အများအပြားတွင် ဖြစ်ပွားကြသည်။ရှေးဦး ခရစ်ယာန်ပြောင်းလဲသူနှင့် သာသနာပြုဖြစ်သော တမန်တော် ရှင်ပေါလုက “ခရစ်တော်သည် ထမြောက်တော်မမူလျှင်၊ ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌ အကျိုးမရှိ သင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်း အကျိုးမရှိ။” ဟုရေးသားခဲ့သည်။
ဓလေ့ထုံးစံအရ အများဆုံးပြုလုပ်သော ဓမ္မမင်္ဂလာအမှုတစ်ခု၏ လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်မှာ ခရစ်တော်က စတင်ခဲ့သော အပြင်ပန်း အမှတ်အသားတစ်ခု ဖြစ်ပြီး အတွင်းကျသော အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် ခရစ်တော်မှတဆင့်ခံစားရရှိသော ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူး ဖြစ်သည်။ အကျယ်ပြန့်ဆုံး လက်ခံထားသော ဓမ္မမင်္ဂလာအမှုနှစ်ခုမှာ ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့် ပွဲတော်မင်္ဂလာယူခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ခရစ်ယာန်အများစုသည် ဓမ္မမင်္ဂလာအမှု သို့မဟုတ် မွန်မြတ်သော အံ့ဖွယ်ရာ ခုနစ်ခုကို အသိအမှတ်ပြုကြသည်- ဗတ္တိဇံခံခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်း(အော်သိုဒေါ့က်စ် ဓလေ့တွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ခြင်း)၊နှင့် ပွဲတော်မင်္ဂလာယူခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော အမိန့်တော်များ၊ အာပတ်ဖြေခြင်း (အပြစ်ဝန်ခံခြင်း)၊ နာမကျန်းသူကို ဆီမွှေးသုတ်လိမ်း၍ ဘိသိက်ပေး ခြင်း၊ နှင့် လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်သာသနာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံများအော်သိုဒေါ့က်စ် ခရစ်ယာန်သာသန ပရိုတက်စတင့်ဘာသာ ရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာ ကက်သလစ်၊ ပရိုတက်စတင့်နှင့် အော်သိုဒေါ့က်စ်ဟူသော အဓိက ဂိုဏ်းခွဲ၃ အုပ်စုကွဲပြားနေသည့် ယုံကြည်သူ ခန့်မှန်းအရေအတွက်ဖြစ်သော သန်းထောင်ပေါင်း ၂.၁ ခန့် ကြောင့်ခရစ်ယာန်သာသနာသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဘာသာတရား ဖြစ်နေသည်။လွန်ခဲ့သော နှစ်တစ်ရာအတွင်း ခရစ်ယာန်များသည် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ရပ်တည်နေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူလူဦးရေကို အဓိက ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများတွင် (တစ်နေ့လျှင် ၂၃၀၀၀ ခန့်) ကျယ်ပြန့်စွာ ပွားများလာမှုသည် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် အလွန်အမင်းကျဆင်းမှုနှင့် အတူတွဲလျက် ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ အဓိကအားဖြင့် ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက (တစ်နေ့လျှင် ၇၆၀၀ ခန့်) တွင် အများဆုံး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဥရောပ၊ အမေရိကနိုင်ငံများ၊ ဖိလိပိုင်နိုင်ငံနှင့် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတို့တွင် အဓိကကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။သို့သော် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၏ မြောက်ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်း၊ သမုဒ္ဒရာပိုင်းဒေသများ (ဩစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန်)၊ ဥရောပမြောက်ပိုင်း (ဂရိတ်ဗြိတိန်၊စကင်ဒီနေဗီးယားနှင့် အခြားနေရာများ အပါအဝင်)၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ အွန်တေးရီးယို၏ ကနေဒီးယန်း ပြည်နယ်များ၊ ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာနှင့် ကွိဘက်နှင့် အာရှ၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများ (အထူးသဖြင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်နှင့် မကာအို) အပါအဝင် နေရာအများအပြားတွင် လျော့ပါးလာလျက် ရှိသည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံအများစုတွင် ပြီးခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် အနည်းငယ်အတွင်း ခရစ်ယာန် ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးများကို တက်ရောက်သူများအထဲမှ ခရစ်ယာန်ဟု မိမိကိုယ်မိမိ သတ်မှတ်သောသူများ လျော့ကျလျက် ရှိသည်။အခြားသူများက ယေဘုယျအားဖြင့် ဘာသာရေး၏ အရေးကြီးမှုကို ယုံကြည်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ခြင်း လက္ခဏာများနှင့် ဆက်စပ်ပြောဆိုကြ စဉ်တွင်အချို့အရင်းအမြစ်များက ၎င်းကို မိရိုးဖလာ အသင်းဝင်မှုမှ ဝေးလွင့်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသသက်သက်သာ ဖြစ်သည်ဟု ရှုမြင်ကြသည်။ ခရစ်ယာန်သာသနာသည် အောက်ပါနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံတော် ကိုးကွယ်မှု အခြေခံ ဘာသာရေးအဖြစ် ပုံစံ တစ်မျိုးသို့မဟုတ်တစ်မျိုးဖြင့် တည်ရှိသည်- အာမေးနီးယား(အာမေးနီးယန်း အပိုစတော်လစ်)၊ဘိုလီးဗီးယား (ရိုမန်ကက်သလစ်)၊ကော်စတာရီကာ (ရိုမန်ကက်သလစ်)၊ဒိန်းမတ် (အီဗန်ဂျဲလ်လိကယ် လူသေးရန်း)၊အယ်လ်ဆာဗေဒေါ (ရိုမန်ကက်သလစ်)၊အင်္ဂလန် (အင်္ဂလိကန်)၊ဖင်လန် (အီဗန်ဂျဲလ်လိကယ် လူသေးရန်းနှင့် အော်သိုဒေါ့က်စ်)၊ဂျော်ဂျီယာ(ဂျော်ဂျီယန် အော်သိုဒေါ့က်စ်)၊ဂရိ (ဂရိ အော်သိုဒေါ့က်စ်)၊အိုက်စ်လန် (အီဗန်ဂျဲလ်လိကယ် လူသေးရန်း)၊လိချ်တန်စတိုင်း (ရိုမန်ကက်သလစ်)၊မဲလ်တာ (ရိုမန်ကက်သလစ်)၊မိုနာကို (ရိုမန်ကက်သလစ်)၊နော်ဝေ (အီဗန်ဂျဲလ်လိကယ် လူသေးရန်း)၊ဆွစ်ဇာလန်(ရိုမန်ကက်သလစ်၊ ရှေးရိုးကက်သလစ်၊သို့မဟုတ် ပရိုတက်စတင့်- ပြည်နယ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိသော ဘာသာရေးဂိုဏ်းခွဲ) နှင့် ဗာတီကန်စီးတီး (ရိုမန်ကက်သလစ်)။တည်ဆောက်ထားသော ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တစ်ခုမျှ မရှိသော်လည်း တစ်ခုသော ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး ဂိုဏ်းအဖြစ် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားဆဲ ဖြစ်သည့် ဆိုက်ပရပ်စ် ကဲ့သို့သော အခြားနိုင်ငံများစွာလည်း ရှိပါသည်။
ခရစ်ယာန်သာသနာ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်း သုံးမျိုးမှာ ရိုမန်ကက်သလစ်အသင်းတော်၊ အော်သိုဒေါ့က်စ် အသင်းတော်နှင့် ပရိုတက်စတင့်အသင်းတော်တို့ ဖြစ်သည်။ ပရိုတက်စတင့် အသင်းတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းတော်ဟူ၍ ခေါ်ဆိုသည်။ ဤအမျိုးအစား သုံးခုထဲမှ တစ်ခုခုနှင့် မကိုက်ညီသော အခြား ခရစ်ယာန် အုပ်စုများရှိသည်။ နိုင်စင်းခရိဒ် (Nicene Creed) ကို “ရိုမန်ကက်သလစ်၊ အရှေ့ပိုင်း အော်သိုဒေါ့က်စ်၊ အင်္ဂလိကန် နှင့် အဓိက ပရိုတက်စတင့် အသင်းတော်များက ခိုင်လုံမှုရှိ၍ ယုံကြည်ထိုက်သည်ဟု လက်ခံထားသည်”။၎င်းတို့ကိုယ်ကို ၎င်းတို့ ခရစ်ယာန်ဟု ခေါ်ဆိုသော အုပ်စုများအကြား ခြားနားသော အယူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့်များ ရှိသည်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အယူအဆများအရ အုပ်စုအများအပြားသည် ဤအမျိုးအစားခွဲခြားမှုစနစ်ကို ငြင်းပယ်သည်ဟု သုံးသပ်သော်လည်း ဤအုပ်စုများကို တစ်ခါတစ်ရံ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းခွဲများအောက်တွင် သတ်မှတ်သည်။အခြားကွဲပြားမှုမှာ အရှေ့ပိုင်း ခရစ်ယာန်သာသနာနှင့် အနောက်ပိုင်း ခရစ်ယာန်သာသနာအကြား အာရုံစိုက်စရာများ ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်း ပါရာချာပ် ( ဂိုဏ်းကြီးများမှ ခွဲထွက်) ဟူသော အသင်တော်ငယ်လေးများလည်း ပေါ်ပေါက်ပြီး သာသနာ ပြန့်ပွားရေးကို ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ ထိုအသင်းတော်လေးများသည် မည်သည့်ဂိုဏ်းဟု တိကျစွာ မရှိပေ။